Aqooneey Waxba Ha Tarin! W/Q :Khalid Idan Yousuf
(Hadhwanaagnews) Thursday, August 09, 2018 09:04:11
Ugu dambayntii waxaan leeyahay bahda waxbarashada ku hawlan, ha niyad jabina wuu iman wanaagguye. Waxaan Eebbe ka rejaynayaa inay imman doonto
Uma qaadan qalinkayga inaan aqoonta ku dhaleeceeyo, balse waxaan doonayaa inaan idinla waddaago waayihii iga soo maray mar aan shaqo u xaraystay Wasaaradda waxbarashada muddo laga joogo shan gu’. Waagaa waxa jirtay in wasaaradda waxbarashadu soo xayaysiisay shaqo macallinnimo ah, taasoo looga baahnaa Gobollada iyo degmooyinka waddanka qaar ka mid ah . Macallimiinta waxa loo doonayay dugsiyada hoose iyo dhexe. Shuruudaha looga baahnaa waxay ahayd in macallinku/macallimaddu sidato shahaado Dugsi sare. Anigu gu’gaa waxaan dhammeeyay dugsiga sare, waxaanan ku jiray sannadkii ugu horreeyay ee Jaamacadda.
"Calibri","sans-serif";"> Muddo markay ka soo wareegtay wakhtigii shaqadu xidhantay ayaan maalin si kedisa u tegay wasaaradda waxbarashada qaybteeda Gobolka, waxaanan ka waraystay halkay ku dambaysay shaqadii macallinnimada ahayd ee ay soo xayaysiiyeen. Maalintaa iyada ah war-wanaagsan Kamaan helin masuuliyiintii goobta joogay, wax aan ku qancana iimay sheegin. Mardambe anigoo iska soo baxaya ayuu ii yeedhay masuul ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda oo goobta ku sugnaa, waxaanu ku bilaabay hadalkiisii sida tan:
Masuulkii: “adeer meeshan cid maad ka garanaysaa”.
Aniga: “Maya adeer”,
Masuulkii: “Adeer qolomaa tahay”,
Aniga: “ Adeer reer hebel baan ahay”,
Masuulkii: “ Adeer waaxda shaqaalaysiinta labba nin oo reer hebellaa u kala sarreeyee orodoo cid u soo ka xayso amma adigu u tag”.
Intani markay na dhexmartay waxaan naftaydii ku idhi “adiguba caqlaad leedahee carar maxaa dhaama”. Arrintani inay waddanka ka jirto markii hore way iga degi weyday, balse markii dambe gadaalbaan ka ogaaday inay caadadeena tahay.
Ugu dambayntii waxaan leeyahay bahda waxbarashada ku hawlan, ha niyad jabina wuu iman wanaagguye. Waxaan Eebbe ka rejaynayaa inay imman doonto , mar la inna odhan doono maxaad taqaannaa..
W/Q: Khalid Idan Yousuf
Personal Blog: khalididan.blogspot.com